नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो अ’सन्तुष्टि पोख्दा गा’लीको ओइरो – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो अ’सन्तुष्टि पोख्दा गा’लीको ओइरो
नायिका केकी अधिकारीले आफ्नो अ’सन्तुष्टि पोख्दा गा’लीको ओइरो
बिगत केही हप्ता यता आमा त्यसै त्यसै त्र’सित हुनुहुन्छ। फेसबुकमा खासै सक्रिय हुनुहुन्न आमा तर आजकल हर दिन हर घन्टा आमाको आँखा अनि ध्यान फेसबुक मै हुन्छ। नसा लाग्यो कि क्या हो आमा भनेर सोधेको, होइन तिमीले केही लेखेको छौ कि भनेर हेरिराको भन्नुभो। अहिले चर्किरहेका विषयमा केही भन्ने वा लेख्ने नगर है भन्नुभो। सहनै गाह्रो हुने प्रतिक्रियाहरु आउछन् अनि मेरो मन भतभत पोल्छ भन्नुभो।
ग’ल्ती मान्छेबाट पो हुन्छ त, माफी मान्छेलाई पो दिइन्छ त। अनि थाहा पाइपाइ यत्रो अपराध गरिदिने? हामीलाई तेस्तो अनुमती छ र? यहाँ कुनै दीपा, पूजा , बर्षालाई ग’ल्ती गर्ने छुट छैन है। भन्देको छु नी। मान्छे बन्ने कोशिस नगर्नु।
ल आमा तपाईंले यो पनि हेरिहाल्न्नु हुन्छ, त्यसैले ढुक्क हुनु है। मैले तेस्तो केही लेखेको छैन। हाम्रो समाजकै समर्थनमा लेखेकी छु। मैले मरनासन्न हुने गरि गा’ली खान्न होला। मेरो चरीत्र जोगिन्छ होला।